Gudiga Doorashooyinka Puntland oo Boosaaso kula kulmey Bulshada rayidka ah+Sawiro – SBC
Gudiga Doorashooyinka Puntland oo Boosaaso kula kulmey Bulshada rayidka ah+Sawiro
Kulankaan oo ay ka soo qeyb galeen qar ka tirsan golaha wasiirada Puntland, mayaarka magaalada Bosaso, gudoomiyaha gobolka Bari, gudiga KMG ah ee furashada axsaabta, nabaddoonada ,cuqaasha, dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada qeybaheeda kala duwan.
Waxaa kulankan loogaga gollahaa sidii gudiga KMG ah ee furashada axsabta ay bulshada u fahansiinlahayeen furashada iyo ka qayb qaadashada axsaabta siyaasada Puntland.
Ugu horayan waxaa kulanka ka war bixiyey gudoomiyaha gudiga doorashada KMG ah ee axsaabta siyaasada Puntland Maxamed Xasan Bare isagoo sharaxaad ka bixiyey shuruudaha iyo qababka logu furankaro axsaabta isagoo sheegay in qof walba oo muwadin reer Puntland ah uu furan karo xisbi cid nana aysan u diidi karin .
Waxaa isna dhankiisa sharaxaad ka bixiyey qaabka ay doorashadu u dhacayso Barkhad Cali Saalax oo ah xubin ka tirsan gudiga doorashooyinka KMG ah isagoo sheegay in xisbiyada isdiiwan geliya ay ka soo baxayaan saddex xisbi kuwaas oo noqon doona saddexda xisbi qaran ee tobanka sano oo dame tartamayaa
Dhanka kale bulshada ayaa dhankooda su aalo kaweydiinaayey gudiga KMG ah qaabka uu qofku axsaabta siyaasada uga qeyb qadan karo iyo weliba da’da uu kaga mid noqon karo xisbiga kaas oo ay uga jawaabayeen gudigu
Arintaan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xili Puntland uu ka dhacay isbadal dhanka dhimuqraadiyada iyo xisbiyada badan taasoo laga guurayo nidaamkii hore ee ku salaysnaa habka beel wax ku qaybsiga,
Ibraahim Maxamuud Qeys
Noofember 27, 2012 at 9:36 pm
waa haboon tahay in xisbiyo la furto si dorashada loga qeyb galo lakin waxaa ila haboon sida ka dhacdey gobolda waaqooyi(somland) in ay sidan oo kale sameeyen oo sedex xisbi uun markii hore calamdiyeen ka dibna ay socon weydey oo dib loo furey oo ay garsiiyeen dhowr xisbi marka armey haboon tahay oo lga dhigo puntland ilaa shan xisbi ai an hadhow loo oran waa nala ka tagey ee xisbiyada hanaloobadiyo? tasi gudiga dorasha haka fekereran ban oran lahaa sabbtoo ah waa in laga dhigaa qorshahan waqti dheer oo umada garsin karta….
BURHAN SALAH says:
Noofember 28, 2012 at 7:33 am
Puntland isbedel fiican ayaa ka muuqda. Waxaan kula talinayaa dadka reer Puntland inay ka qayb qaataan isbedelka ayna taageeran nidaamka dimocratic-yada kasoo if baxday Puntland.